Nzira yekudzidza sei kumayunivhesiti eNorway? - ALinks
Iyo yekubvumidzwa uye kunyorera maitiro muNorway yedzidzo yepamusoro ndeye kuburikidza nechero institution kana kuburikidza NUCAS. Maitiro emasangano ane zvakasiyana zvinodiwa uye nguva dzekupedzisira. Usati watanga hurongwa unofanirwa kuwana ruzivo rwese rwunodiwa. Ngazvive zvinyorwa, zvinodiwa, uye nguva dzekupedzisira tarisa zvishoma zvinodiwa padzidzo.
Mutengo wekugara muNorway wakakwira. Asi, kudzidza muNorway kunogona kusadhura sezvaunofunga. Sezvo mayunivhesiti uye makoreji haabhadharisi mari yechikoro yevadzidzi vekunze. Norwegian mayunivhesiti anopawo dzidzo yemhando yepamusoro. Zvakare, kudzidza muNorway kunogona kuvandudza mikana yako yebasa.
Tora ruzivo pano rwekuti ungadzidza sei kumayunivhesiti eNorway.
Norwegian yepamusoro-dzidzo masangano emhando nhatu uye ndeehurumende. Izvi zvinosanganisira mayunivhesiti, makoreji emayunivhesiti, uye makoreji ehunyanzvi. Parizvino, kune 9 mayunivhesiti, 8 mayunivhesiti makoreji, uye mashanu emakoreji esainzi. Norway zvakare ine akawanda akazvimiririra edzidzo yepamusoro zvikoro. Gore redzidzo muNorway rinobva muna Nyamavhuvhu kusvika Chikumi uye kupatsanurwa kuri muzvikamu zviviri. Mazwi aya matsutso, Nyamavhuvhu kusvika Zvita, uye chirimo, Ndira kusvika Chikumi. Chimiro chedzidzo yepamusoro muNorway chakafanana neUK. Bergen, Kristiansand, Oslo, Tromsø neTrondheim inzvimbo dzakakurumbira dzevadzidzi.
Ndezvipi zvinodiwa kuti udzidze kuNorway?
Dzidzo yesekondari ndiwo mutemo wekutanga wekupinda kumayunivhesiti eNorway. Mutemo uyu wakatemerwa neNorwegian Agency for Quality Assurance in Education. Kune vamwe vadzidzi, vanoda rinosvika gore rezvidzidzo padanho reyunivhesiti.
Zvidzidzo zvakakosha kana minda yekufunda muchikoro chesekondari inoda zvakakosha zvekubvumidzwa. Iwe unofanirwa kutarisa kune iyo institution kuti uwane rumwe ruzivo nezve akakosha qualifications.
An undergraduate kana bachelor's degree yakaenzana nemakore matatu ekudzidza padzidzo yepamusoro. Inosanganisira makosi akaenzana kana angangoita 3/1 gore kana yakazara-nguva zvidzidzo muzvidzidzo zvinoenderana nechirongwa.
Masangano edzidzo yepamusoro anowana mari kuburikidza neBazi reDzidzo & Tsvagiridzo. Havabhadharisi mari yechikoro. Zvinoreva undergraduate uye vanopedza kudzidza, vemuno uye vekunze vadzidzi vanodzidza mahara.
Asi kana ukasarudza kudzidza kune yakazvimirira institution ungangoda kubhadhara mari yechikoro. Kunyangwe izvi zvinowanzo kuchipa kupfuura UK uye vekuEurope vamwe. Vadzidzi vekune dzimwe nyika vanobhadhara mari yakafanana neyeNorway.
Kunyangwe iyo mari yechikoro iri yemahara pano vadzidzi vanofanirwa kubhadhara diki semester vadzidzi mari yemubatanidzwa. Mari iyi inopa mukana kune bvunzo, kufamba kwakachipa, hutano, uye nzvimbo yekuraira kwemitambo. Iwe unofanirwa kubhadhara pakati pe350 ne700 Norwegian kroner (NOK) pamesita.
Mutauro zvinodiwa kuti udzidze kuNorway
Norway ndiyo musha wemitauro miviri - Norwegian neSami. ChiNorwegian ndiwo mutauro wekutanga wekudzidzisa uye Chirungu ndiwo mutauro wechipiri. Saka haufanire kudzidza chiNorwegian kuti upfuure.
Kunyange zvazvo kunzwisisa mutauro wechiNorwegian kuchabatsira kugara munzvimbo itsva. Ichakubvumidza kuti utaure nevamwe vadzidzi vanobva kuDenmark neSweden. Unogona kugara uchitanga kudzidza mutauro mutsva kumba kana kana wangove muNorway kuzvidzidzo zvako.
Chimiro chezvidzidzo muNorway
Dzidzo yepamusoro muNorway inobvumidza masangano uye zvirongwa zveyunivhesiti. Kunze kwemamwe mayunivhesiti akazvimirira uye makoreji, masangano edzidzo yepamusoro anotungamirwa nehurumende.
Bologna process inoteverwa muNorway kubvira 2003 yedzidzo yepamusoro. Norway inoshandisa madhigirii 'etatu nembiri netatu' yeBachelor's, Master's, neP.D. madhigirii eEuropean standards. Nehurongwa hutsva, zviri nyore kuwana kuzivikanwa kwezvikwaniriso kune dzimwe nyika. Izvi zvinobatsira vadzidzi vepasirese vanopedza zvese/ chikamu chedzidzo yavo muNorway.
Pane zvakasarudzika kumakoreji ekare emayunivhesiti kune anotevera makosi:
Dhigirii yemakore maviri (mumiriri wekoreji),
Five-year consecutive master’s degrees,
Makore matanhatu mapurogiramu ehunyanzvi,
Madhigirii eMasters enguva imwe kusvika kune imwe nehafu yenguva,
Makore mana bachelor's madhigirii ekuita mimhanzi uye kuita zvemitambo uye
Zvirongwa zvemakore mana mudzidzo yevadzidzisi.
Kune akawanda emapurogiramu ekudzidza anosanganisira masters, unogona kunyorera kuyunivhesiti kana kukoreji. Vadzidzi vanofanirwa kuenderana neakasiyana mazuva ekunyorera panguva yekugamuchira kana kuramba zvinopihwa. Zvikoro pano zvishoma & zvidiki zvichienzaniswa nedzimwe nyika asi zvinopa dzidzo yemhando yepamusoro. Kune mamwe minda, masangano kana nharaunda dzedzidzo muNorway dziri pasi rose.
Mazhinji masangano eNorway ane zvibvumirano zvakasiyana-siyana nemasangano edzidzo yepamusoro ekunze. Izvi zvibvumirano zvinowanzogadzirirwa kuti vadzidzi, vatsvakurudzi, uye vadzidzisi vachinjane mazano.
Asi, iwe unogona kuwana mapurogiramu enyika anopa zvikoro uye mamwe maitiro emari. Kune vese vadzidzi vepasirese vanoda kudzidza kuNorway. Kune ese aya mapurogiramu zvimwe zvinorambidzwa uye prerequisites zvinoshanda.
Dzidzo dzakasiyana-siyana dzinopihwa nemasangano akazvimiririra uye dzisingabatsiri dziripo.
Fulbright, zvipo zvinonyanya kuvadzidzi veUS uye vadzidzi
Mvumo yekugara kwemudzidzi
Vagari venguva dzose kana vagari vemuEuropean Economic Area (EEA) havadi visa kuti vadzidze kuNorway. IEEA ndiyo European Union (EU) pamwe neNorway, Iceland, uye Liechtenstein.
Chero ani zvake angada visa mudzidzi kuti adzidze muNorway.
Iwe unogona kunyorera vhiza yemudzidzi kune yako yepedyo Norway consulate. Yunivhesiti inofanirwa kukutsigira mune yako visa application.
Maitiro ekunyorera sei zvidzidzo muNorway?
Norwegian University uye Makoreji Admission Service (NUCAS) vane centralized masevhisi ezvidzidzo zveBachelor. Kana usiri mugari kana mugari weNorway, unoda kutanga kubva Kudzidzira muNorway.
Unogona kunyorera dhigirii reMasters kuburikidza neyunivhesiti yaunoda. Vacha:
Tarisa fomu rekukodzera,
Udza mudzidzi kana achida kupasa bvunzo yekupinda
Ipa tsamba yako yekubvuma.
Yese institution uye kosi ine zvimwe zvekubvumidzwa zvinodiwa uye maitiro ekunyorera. Tarisa neyunivhesiti nezvazvo usati wanyorera.
Zvisineyi nedanho rekudzidza iwe unofanirwa kuendesa fomu rakazara rekunyorera uye chitupa chedzidzo. Kune mamwe makosi kana zvirongwa, iwe unofanirwa kupasa bvunzo yeaptitude uye/kana kuendesa chirevo chako.
Mazuva ekunyorera anoitika kwegore idzva redzidzo pakati paZvita kusvika Kurume. Tarisa kune iyo institution nezve mazuva ekupedzisira.
Ndinogona kudzidza mahara muNorway?
Pasinei nekwakabva nyika yemudzidzi, mayunivhesiti eruzhinji haabhadharisi mari yechikoro. Dzidzo ndeyemahara muNorway pamatanho ese. Vadzidzi vanogona kunakidzwa nezvose zvavanopa vasinganetseki nemari yechikoro. Unogona kuwana dhigirii kuyunivhesiti yemhando pasina muripo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakawanda nei vadzidzi vekunze vachienda kuNorway.
Source: Hupenyu muNorway
Mufananidzo uri pabutiro uri kumwe kuStavanger, Norway. Mufananidzo na Nathan Van de Graaf on Unsplash
Rondedzero yemayunivhesiti muSaudi Arabia
Sisitimu yedzidzo: Palestine
Iwe unoda kudzidza muUnited States? Pukuta pano !!
Nzvimbo dzakakwirira-Dzakashanyirwa nzvimbo dzeVashanyi muNorway
Yakanakisa maYunivhesiti muAustralia evadzidzi Vepasi rese
Makunivhesiti Ekupedzisira mashanu muMexico
Makunivhesiti Emhando yepamusoro muIraq